Ahoana ny famoretana sy ny famoahana ny rakitra amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao izahay fangeo sy decompress ny fisie avy amin'ny fizarana GNU / Linux tianao indrindra, mampiasa baiko rehetra avy amin'ny console ianao. Izy io dia lahatsoratra iray natokana ho an'ny vao manomboka ary ao aminy dia tsy hampidirintsika ny fitsaboana tariby toy ny amin'ny fampianarana hafa, satria hasehony fotsiny ny fomba faneriterena sy ny famoahana fametavetana raha tsy fonosina miaraka aminy ilay fitaovana tara mahafinaritra.
Na dia somary tsotra aza ny famoretana sy ny famoretana, matetika ny mpampiasa dia mitady Internet amin'ny fomba hanaovana ireo fihetsika ireo. Heveriko fa tsy toy ny rafitra miasa hafa toa ny MacOS sy ny Windows izay misy fitaovana manokana misy sary sy intuitive ampiasaina, ao amin'ny GNU / Linux aseho matetika izy ireo endrika misimisy kokoa ary fitaovana isan-karazany ho an'ny tsirairay amin'izy ireo, na dia misy koa fitaovana tsotra amin'ny ambaratonga sary ...
Ho an'ny famoretana sy ny famongorana dia hampiasa fonosana roa lehibe isika, satria izy ireo angamba no endrika takiana be indrindra ary ireo izay matetika sendra antsika matetika rehefa miasa isika. Rafitra Unix-like. Gzip sy bzip2 no tiako horesahina.
1 Miasa amin'ny gzip
2 Miasa amin'ny bzip2
Miasa amin'ny gzip
Para mametaka amin'ny gzip, ny endrika hotanterahintsika dia Lempel-Zi (LZ77), fa tsy ZIP toy izany, satria mety hiteraka fisafotofotoana ilay anarana. Avy amin'ny GNU ZIP ilay anarana, ary natao ho solon'ny endrika ZIP izy io, saingy tsy mitovy. Te-hanazava izany aho ... Eny, hamoahana rakitra:
Miteraka rakitra iray mitovy amin'ny tany am-boalohany miaraka amin'ny extension .gz, amin'ny ohatra teo aloha dia ho document.txt.gz. Fa kosa, ho an'ny ovay ny anarana fivoahan'ny iray manokana:
Para decompress izay efa voafintina dia tsotra ihany, na dia afaka mampiasa baiko roa samy hafa aza isika miaraka amin'ny vokany mitovy:
Ary ho azontsika ilay rakitra unzipped tsy misy extension .gz.
Miasa amin'ny bzip2
Raha ny amin'ny bzip2, dia mitovy amin'ny fandaharana teo aloha, saingy misy algorithm famatrarana hafa antsoina hoe Burrows-Wheeler sy Huffman coding. Ny fanitarana azontsika amin'ity tranga ity dia .bz2. Raha te hangeja rakitra iray dia mila mampiasa fotsiny isika:
Amin'izay ahazoana rakitra.txt.bz2 voafintina. Azontsika atao koa ny miovaova ny anarana famoahana miaraka amin'ny safidy -c:
Ho an'ny famongorana dia hampiasa ny safidy -d an'ny fitaovana bunzip2 izay solonanarana:
Raha mila fanazavana fanampiny azonao ampiasaina iray arahin'ny baiko ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny famoretana sy ny famoahana ny rakitra ao amin'ny Linux
Jaime Perea dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny hafatrao, mahasoa foana izy ireo.
Angamba mety hahaliana ny manonona ny xz, satria ampiasaina kely ihany koa izy io. Io dia eo anelanelan'ny bzip2 (miadana, saingy mamintina betsaka) sy gzip (haingana, nefa tsy mahomby). Amin'ny sehatra lehibe izany, satria toy ny zava-drehetra ... miankina izany. Ireo tars tafiditra ao amin'ny fisie Debian / Ubuntu .deb dia matetika no voafintina ao anaty endrika xz.
Ny fomba fampiasana azy dia mitovy amin'ny baiko sos hafa.
Valiny tamin'i Jaime Perea
Salama, te-hangataka aho mba hanaovana izany fa amin'ny tar.gz satria io no be mpampiasa indrindra (raha ny fahitako azy araka izay rehetra alaiko amin'ny Internet)
Inona no lazain'izy ireo momba ny endrika malaza fa multiplatform toy ny .7z? Tokony hanome anarana azy ireo koa izy ireo
Salama Jose, ny zava-mitranga amin'ny rakitra tar.gz dia ny fampiasanao baiko hafa izay tar ary amin'ity tranga ity ny baikon'ny tar dia tsy mamintina (na mamoaka tsindrona) fa ampiasaina hivondronana (na ungroup) rakitra maromaro ao anaty iray, ity dia misy fampidirana amin'ny baiko gzip sy bzip2 izay ahafahanao mamehy sy mamoaka decompress.
Marina tanteraka ianao, Ernesto, amin'ny endrika 7z maimaimpoana izay manome toerana ho azy ao amin'ny Windows, manolo ny zip sy rar, ary tsy tononin'izy ireo izany?
usr dia hoy izy:
Tamin'ny taonjato faha-21 ary mbola mampiasa baiko hangejana fisie tsotra? Mampalahelo ity lahatsoratra ity
Mamaly an'i usr
Katrin dia hoy izy:
Angamba mety hahaliana ihany koa
Valiny tamin'i Katrin